UJames Ellroy Imfihlo. Intlanganiso ekhethekileyo kunye naye eMadrid | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama
Zonke iifoto kweli nqaku zi (c) Mariola DCA. UFnac Callao. IMadrid. NgoSeptemba 20, 2019.
Kuhlala kum Ubuncwane boncwadi. Ayisiyiyo yonke imihla odibana nenye yee-greats phakathi kwama-greats, hayi inoveli yolwaphulo-mthetho kuphela, kodwa kwihlabathi langoku. Y UJames ellroy Ayindinikanga kuphela amaxesha amaninzi okufunda okunomdla kwaye okunomdla, kodwa kunye nobuhlobo obulungileyo kunye nefuthe elininzi kwindlela yam yokubhala kunye nokufunda. NgoLwesihlanu odlulileyo umhla we-20 wayeseMadrid, kuqala indawo yakhe ukhenketho lwaseYurophu ebonisa inoveli yakhe yamva nje, Esi saqhwithi, isihloko sesibini emva Ukucoceka yakhe I-trilogy yesi-2 yeLos Angeles Quartet.
Yiyo ezingapheliyo wento esiphila kuyo abafundi abambalwa abanethamsanqa abaye kwi Ukudibana okukodwa kunye omkhulu (ngandlela zonke) umbhali waseLos Angeles. Oko sikubuzileyo, waphendula, wagqabaza kwaye wakhonkotha kumgca wakhe wesiqhelo zembali, iposi, ilizwi elinamafutha kunye netalente engenakuthelekiswa nanto ukubala umbono omnyama we la Imbali yaseMelika yenkulungwane yama-XNUMX.
1 Imbali ngenkcazo (kodwa hayi kangako)
2 Imibuzo kunye neempendulo
2.1 Ukudalwa kweenoveli
2.1.2 Iinkqubo njengombhali
2.1.3 Ulwimi kunye nesimbo
2.2 Intlonipho yakho ngomsebenzi wamapolisa wokwenyani
2.3 Malunga nesi saqhwithi
2.4 Iimuvi kunye nomdlalo weTV owuthandayo
2.5 Osebenza nabo obathandayo: zakudala kunye nabahlali
2.6 Imisebenzi engeyonyani
2.7 Iliwa, oonyana kunye noBob Dylan
2.8 UBud White, uRussell Crowe kunye noSterling Hayden
2.9 Ukhululekile kwaye ufikeleleka lula
Imbali ngenkcazo (kodwa hayi kangako)
Sele kunjalo izinto ezahlukeneyo zinikezelwe nantsi inja kaMtyholi kunye neenoveli zakhe, ezifana enye, enye o enye. Ke Ndifikelela kwinqanaba yentlanganiso ngoLwesihlanu odlulileyo emva kwemini apho abanye babafundi bakhe bekwazile ukumbuza kwaye thetha naye ngayo yonke into into esasiyifuna. Ewe, ayifani.
Ke ukuya geek ngaphezulu kwegeek utshintsho (phantse umntu obulala kakhulu, njengoko uEllroy ngokwakhe wayibiza njalo) ehlala ivele kwezi meko bamnqanda iimodareyitha xa uwele umgca ngomxholo we inkolo. Kwaye wathetha ngokungacacanga phuma apha kufakwe ukugquma okuvela kumbhali. Kodwa oko kwakusele xa abasebenzi beyekile kwaye sibonile imizila engaqhelekanga yomntu.
UJames Ellroy (eLos Angeles, 1948) ngu- isimilo ngokwakhe. Ngomzimba wakhe owoyikisayo, owoyikisayo kunye neembali ezifundwe kakuhle, kanye ngaphandle kwebhokisi Wayecacisile ukuba uphumelele ekuphenduleni kwezopolitiko ukususela ngoku okanye ngaphambili, buhlanga o inkolo phakathi kwenye into. Kwakukho ukuze bathethe ngeencwadi zabo kwaye bafundise wonke umntu, ukuba bayishiya imisebenzi, ubomi, abantwana, inkosikazi, indoda, izithandwa, nantoni na, ukuqala ukufunda. Kwaye nangokunjalo Ukufumana imali ukuze uphile ubomi obuphezulu, ngeemoto zodidi oluphezulu, abafazi, ukutya okumnandi kunye nokusela okumnandi. Nokuba usela amanzi ngoku, awunyanzelekanga ukuba ususe ixesha elidlulileyo elizele utywala neziyobisi.
Ixesha elide lokuthetha lidlulile kuthi, nge indawo ndikhululekile, Hlu keneyo kunye nobunzima. Kwaye iintloni kunye noloyiko lusishiyile, phakathi kwezinye izinto kuba sele siyazi intsomi yezo ndlela zimbi. Ingaphezulu kwe-facade kunokwenyani.
Ngaphandle kokuqhubeka, ngoncedo lwe intentrprete, siya kwimibuzo ebesifuna ukukubuza yona, enje:
Okucutha kukhangelo rhoqo lwe hook umfundi kunye nezihloko ezinokuchukumisa ezona zinto zibuthathaka, ezothusayo okanye ezinomdla kwicala elimnyama lembali kunye nendalo yomntu. Ke ubundlobongela, ubuntatheli obunamaphepha, ulwaphulo-mthetho, uphando lwamapolisa, iimvakalelo zendalo kunye nothando njengothando, umnqweno, umsindo, ukoyikeka ziinjini ezinamandla ezabiwe lulo lonke uluntu. Kwaye iyathengisa. Nokuba ku akazami kwaphela ukuhlekisa ngenoveli yesiNtu.
Kwaye inkcazo ayinike ngohlobo lwesihloko yile: «Iinoveli ezinkulu ziziphumo zengqondo enye, intliziyo enye kunye nomphefumlo omnye », kwaye abanakuthelekiswa nomzekelo weskripthi somdlalo bhanyabhanya okanye uthotho lweTV. Kungenxa yoko le nto kamva, xa ebuzwa ukuba ucinga ukuba kungakho Iinoveli ezilungileyo ezibhalwe ngababhali abangaphezu komnye, uphendule lonto hayi.
Uyilo olungaphezulu kwephepha le-100 lokucwangcisa inoveli ethi kamva bhala ngesandlanjengoko idlula iikhompyuter. Iikofu ezimbini ngoku zibhala, ziphinde zibhale kwaye ubhale ngaphezulu kude kube kugqityiwe kwaye umncedisi wakho uyilahla kwifayile yekhompyuter.
Ulwimi kunye nesimbo
Ukuba kukho into ebonakalisa u-Ellroy, ngaphandle kweziza zakhe ezinde nezintsonkothileyo, sisitayile eso. ngamanye amaxesha i-telegraphic kwaye ihlala incisive, ukusika, i-hyper-condense kunye nokuncitshiswa. Ngobuninzi be Izifundo o Ubume kunye nolunye ulwakhiwo olucace gca. Ucacisile ukuba lkwaye uyaluthanda ulwimi lwesiNgesi kwaye ngakumbi isiNgesi saseMelika ukuba, kwangaxeshanye, ineempembelelo ezininzi kunye nemixube yabanye.
Intlonipho yakho ngomsebenzi wamapolisa wokwenyani
Ukuyongeza phezulu ngu unomdla kuphando lwamapolisa kunye neyakhe izifinyezo, isiqe ijargon okanye indlela yakhe yokubhala Iingxelo iguqulela kakhulu kumabali abo. Kwaye kumbuzo we kutheni baninzi abalinganiswa, ngesiqhelo amapolisa, abaxhaphaza utywala okanye iziyobisi, waphendula wathi kwabo ubaziyo ngokobuqu Isinye kwisithathu ngamakhoboka otywala. Kodwa bane imbeko epheleleyo ngomsebenzi abaqhele ukuwenza. Ewe ngokunjalo, abo kwi uyakuthanda ukudala baphantse bahlala mbi yequmrhu.
Malunga Esi saqhwithi
Kungcono ufunde Ukucoceka ngaphambili, Wacebisa xa ubuzwa ukuba ungayifunda le noveli intsha ngokuzimeleyo. A) Ewe abalinganiswa bayaziwa esele ivele kwi-Quartet yokuqala ye-LA (Dudley Smith, Buzz Meeks, Sid Hudgens, njl.) Kwaye kule trilogy yesi-2 Umncinci kwaye ubabuyisela kwiminyaka ye-WWII.
Iimuvi kunye nomdlalo weTV owuthandayo
Amanqatha entonga Ucingo, uthotho lweTV, awayengayithandi kwaphela. Ibhalwe kakubi kwaye ilahlekisa, uphawule ngokungqalileyo. Nangona kunjalo, wathetha ngokumangalisayo ngayo Ukubulawa, malunga nembono kunye nendlela yokubalisa yeNordics.
Naye wayengayithandi ngemini yayo ulungelelwaniso lwefilimu olusayiniweyo UBrian Palma malunga Umnyama dahlia, esivumelene ngayo sonke. Kwaye, nangona engamthandi uQuentin Tarantino, Ewe ngaphandle Kudala-dala kwihollywood, kuba lo mfanekiso uphumelele kangangokuba kwabonakala kuye malunga nale ndawo ukuba uyazi kakuhle.
Osebenza nabo obathandayo: zakudala kunye nabahlali
Uphawule ukuba UDon Winslow akafundwanga, lowo babemcele, kodwa ewe Ndiyakuthanda UDon DeLillo kunye nayo Libra. Okanye ezakudala ziyathanda URoss MacDonald (umdali womcuphi Umtoli we-Lew), nangona wayichaza njengeyonyani kwaye ikhuliswa kakhulu, UJames M. Cain, (umbhali we Unoposi uhlala ebiza amatyeli amabini). Kwaye wabalaselisa ngaphezulu kwako konke Isando seDashiell njengaye umkhuthazi wohlobo lwe-noir.
Ukuba uceba ukupapasha. Abanye amanqaku malunga Iingxelo Ngokwenene ukubulala kwaye malunga nomdlali weqonga Imayini yetyuwa neemeko zokusweleka kwakhe, eya kubandakanya ne inoveli emfutshane. "Oko iyakuba ndlelantle yam yobuntatheli," utshilo.
Iliwa, oonyana kunye noBob Dylan
Eyona mibuzo kwi-anecdotal zazingezo Kutheni engathandi iliwa okanye engenabantwana. Kweyokuqala, waphendula ngokoqobo ukuba kunjalo iliwa "ikaka" kwaye emva koko, ngokuhlekisa ngakumbi, ukuba kufuneka nibe ngabantu be-odolo, ninxibe njengaye, njl.
Kubantwana, abahlala benemali eninzi yokuchitha kubomi obulungileyo. Kwaye yintoni ubucinga ntoni ngebamnike Nobel a dylan watsho njalo "Hamba shit" kwaye yintoni leyo ebekufanele kakhulu oko UFilipu uRoth, umzekelo, angaphumla ngoxolo, okanye.
UBud White, uRussell Crowe kunye noSterling Hayden
Ndiyaphela ngo intetho yam ethile Isiqingatha singcangcazela kunye no-Ellroy. Kuba Ndandinaso nje isibindi ndikunike okona kuzinikela kwam Enkosi ngabalinganiswa bam abathathu Iintandokazi zegalari enkulu: UPete bondurant, de America y Abathandathu bamagrats, kwaye UDudley smith y Umhlophe uBud de Imfihlo ye-LA.
Kwangoko wandijonga Kwaye wandixelela ukuba kunjalo, bendithetha ngemovie, akunjalo? Ndiyivumile kwaye kwangoko ndaphawula oko Enkosi kuye bendifakwe kwiinoveli zakhe kwaye wazigqiba phantse zonke. Hayi kulungile ke makhulu waphendula. Kwaye ewe, sele Bud Mhlophe uyenzile URussell Crowe, nangona kunokwenzeka, Ukukhetha kwam ukutolika bekuya kuba njalo USterling Hayden».
Kwaye sele sele ndiza kuphelelwa ngamandla kukumva ekhankanya omnye wabadlali bam bakudala abathandwayo. Ndathi, "Ndoda, ewe, ukuba loo movie ibiyenziwe Kwii-50s, IHayden yayiya kuba yinto efanelekileyo». Nangona kunjalo, andinakuphendula ngcono.
Ukhululekile kwaye ufikeleleka lula
Oko kubonisa ukuba i poses zezona zibalulekileyo. Kuba kwimisayino kunye nemibuliso uEllroy ayinakuba kufutshane, inobuhlobo, inobuhlobo kwaye ikwimeko entle.
Wathetha kwaye ebuza wonke umntu kwiifoto nakwiividiyo, Wayenomdla kumagqabantshintshi awenziwe kuye, waxhawula izandla wathetha amagama ambalwa ngelixa esityikityayo. Undithumele ekhaya, bekushushu kakhulu apho, watsho, ngelixa ndinokubulela nje kuphela kwaye ndibulela ngakumbi ngeencwadi zakho. Ke ndigqibezela nale ividiyo emfutshane yentetho yakhe kunye nelo xesha nabafundi.
Funda uEllroy ngoku. Grrrr ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UJames Ellroy Imfihlo. Intlanganiso ekhethekileyo kunye naye eMadrid